Fibre optic adaptha Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Fibre optic adaptha Factory
Ama-adaptha we-fiber optic amanye abizwa nge-fiber optic coupler iyithuluzi elincane elisetshenziswa kuma-fiber fiber system anemicu yokufaka eyodwa noma ngaphezulu kanye nefayili eyodwa noma eziningana zokukhipha. I-adaptha ye-fiber optic ivumela izintambo ze-fiber optic patch ukuthi zinamathiselwe komunye nomunye noma kwinethiwekhi enkulu, okuvumela amadivayisi amaningi ukuthi axhumane ngasikhathi sinye. Isakazeka kakhulu, isetshenziswa kabanzi kulayini wokudlulisa we-fiber optical nokuxhumeka komsebenzisi wokugcina wamamayela wokugcina.
Ama-adaptha weJera optical fiber angafakwa ezinhlotsheni ezahlukahlukene zezixhumi ezibonakalayo emikhawulweni yomibili ye-adaptha ye-fiber fiber ukubona ukuguqulwa phakathi kwezinhlaka ezihlukile ezifana neFC, SC, ST, E2000, MPO, MTP, MU nokunye.
IJear inikezela ngomkhiqizo ophelele wama-adaptha we-fiber optical ngenani eliphakeme, elizinzile nentengo yokuncintisana. Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane ngama-adaptha.